Yuusuf, Zanawi iyo Uweri Musevani ayaa shir Sadex Geesood ah yeesay | maakhir.com
Yuusuf, Zanawi iyo Uweri Musevani ayaa shir Sadex Geesood ah yeesay
Adis-Ababa:- Shir Sadex Geesood oo ay wada yeesheen Masuuliyiinta Dalalka Itoobiya, Somaliya iyo Uganda kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid ay Masuuliyiintaasi kaga wada hadlayaan Xidhiidhkooda ka dhaxeeya ee soo jireenka ah, C/laahi Yuusuf Axmed ayaa ugu horayn sheegay in Dalkiisa uu Madaxda uu yahay ay ka Hulcayaan Dagaalo.
Meles ayaa sheegay in ay dowladiisu dooneyso xiriir gaar ah oo dhexmara dowladiisa iyo Labada dowladood ee kale, wuxuuna shaaca ka qaaday in ay Itoobiya diyaar u tahay in ay gacan lixaad leh siiso dhamaanba dowladaha Africa, siiba Dalka ay Dagaaladu Afaayeen ee Somaliya.
Mr Zanawi ayaa sheegay in Dalka Somaliya ay ka jirto Nabad laysku halayn karo taasi oo ay Cududooda ku keeneen Ciidamada Dawlada Itoobiya, kuwaasi oo Muquuniyay kooxaha ka soo horjeeda Dawlada Somaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya C/laahi Yuusuf ayaa uga Mahadceliyay Masuuliyiinta dowladaha Ugandha iyo Itoobiya taageerida ay siiyaan Soomaalida, wuxuuna sheegay in looga baahan yahay in ay sii wadaan dadaalkooda ku aadan nabad ku soo celinta dalka Soomaaliya, taasoo uu sheegay in Soomaalida kaliya ayan u ahayn faa’iido balse ay nabadgalyada Gobolka bariga Afrika wax ka tarayso oo laga hor tagay Masiibo ku sii fidaysa.
Dhanka kale Madaxwaynaha Dalka Uganda Uweri Musevani ayaa isna dhankiisa sheegay inuu Taageeray dadaalada Dalka Somaliya Nabada loogu soo Celinayo isaga oo sheegay in Dalkiisu oo markiiba ka jawaabay dalabkii ay u soo jeediyeen midawga Afrika ee ahaa inay Dalka Somaliya keenaan Ciidamo nabad ilaalin ah.
Gebagebadii Kulanaaski sadex geesoodka ahaa ayaa waxa soo afmeeray C/laahi Yuusuf Axmed isaga oo mar labaad Mahad naq u soo jeediyay dawladaha Uganda iyo Itoobiya oo uu sheegay inay kaalin xoogle ka qaateen soo celinta Nabada Dalka Somaliya.
« Ninkii Ajaanibka ahaa ee Duleedka Ceerigaabo Lagu haystay ayaa maanta la soo samata bixiyay
Maxaabiis ayaa ooda jiidhay Galabta Xabsiga Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland »